Dowlada Gabon oo gacanta ku dhigtay hogaamiyihii Inqilaabkii Fashilay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dowlada Gabon oo gacanta ku dhigtay hogaamiyihii Inqilaabkii Fashilay
Dowlada Gabon oo gacanta ku dhigtay hogaamiyihii Inqilaabkii Fashilay
Xukuumada Gabon ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay Taliyihii ciidamadii shalay sameeyey afgembigii dhicisoobay, waxaana la sheegay in iska horimaad ka dhacay xarunta Raadiyaha Qaranka ay ku dhinteen labo kamid ah askartii halkaasi qabsaday.
Xubnaha nolol lagu qabtay waxaa kamid ah, Taliyaha ciidamada hogaaminayey Lieutenant Kelly Ondo Obiang oo ka hadlay raadiyaha isagoo ugu baaqay shacabka inay hubka qaataan oo xukunka ka tuuraan Madaxweyne Cali Bongo oo ay qoyskiisa kasoo talinayeen dalkaasi 50kii sano ee lasoo dhaafay.
Cali Bongo ayaa bishii Oktoober loo qaaday dalka Sacuudiga oo uu ku galay qaliin, kadib markii la sheegay inuu ku dhacay cudurka wadnaha, waxaana bishii Nofeember la geeyey dalka Marooko oo uu hada ku sugan yahay, halkaasi oo la sheegay inuu ku nasanayo.
Madaxweyne Bongo ayaa xilka ka dhaxlay aabihiis Cumar Bongo sanadkii 2009, aabihiis ayaa dalkaasi kasoo talinayey muddo 40 sano ah.
Illaa iyo hada Cali Bongo kama hadal inqilaabkii fashilay ee shalay ka dhacay dalkiisa, iyadoo la sheegay inuu dhawaan soo jeedin doono khudbad.
Ururka Midowga Afrika ayaa si adag u cambaareeyey inqilaabka ay isku dayeen qaar kamid ah militariga Gabon.